विन्डोजमा कसरी उत्तम एसएसडी प्रदर्शन पाउने - साम्यिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र बी २ बी बजार समाचार
16 सक्छ, 2021 13 सक्छ, 2021 Skylly ब्लग, व्यापार, प्रविधि
विन्डोज र स्थापित प्रोग्रामहरू माइग्रेट गर्नुहोस् वा फ्रीवेयर प्रयोग गरेर एसएसडीमा HDD अपग्रेड गर्नुहोस्।
BIOS मा AHCI मोड सक्षम गर्नुहोस्।
क्याचिंग लेख्न सक्षम गर्नुहोस्।
विन्डोजमा सर्वश्रेष्ठ एसएसडी प्रदर्शन गर्न उत्तम सुझावहरू:
के तपाईंले मायालुपूर्वक आफ्नो HDD लाई SSD मा अपग्रेड गर्नुभयो? यदि हो भने, यो पोस्ट पढिरहनुहोस्, म तपाईंलाई केहि सुझावहरू देखाउँछु, जसले तपाईंलाई धेरै समय बचत गर्न मद्दत गर्दछ र SSD बाट उत्तम प्रदर्शन प्राप्त गर्न सक्दछ।
सुझाव १: विन्डोज र स्थापित प्रोग्रामहरू माइग्रेट गर्नुहोस् वा फ्रीवेयर प्रयोग गरेर एसएसडीमा HDD अपग्रेड गर्नुहोस्
विन्डोज र स्थापित प्रोग्रामहरूलाई एसएसडीमा क्लोन गर्न वा एचडीडीलाई क्लोन एसएसडीमा सार्न सुझाव दिनुहोस्, जसले तपाईंलाई पुनर्स्थापनाबाट बच्न मद्दत गर्दछ। यदि तपाईं शुरुवातकर्ता हुनुहुन्छ र ट्रान्सफर ओएस को लागी सुविधाहरु संग एक सहज मैत्री अझै समृद्ध प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाई गलत हुन सक्नुहुन्न MiniTool विभाजन विजार्ड.
यहाँ विस्तृत चरणहरू छन्।
चरण १: MiniTool पार्टीशन विजार्ड डाउनलोड र स्थापना गर्नुहोस्, र त्यसपछि यसको ईन्टरफेस प्राप्त गर्न प्रोग्राम सुरू गर्नुहोस्:
चरण २: "SSD / HD विजार्डमा OS लाई माइग्रेट गर्नुहोस्" छनौट गर्नुहोस् यदि तपाइँ OS लाई ट्रान्सफर गर्न सोच्दै हुनुहुन्छ र SSD मा मात्र स्थापित प्रोग्रामहरू। तर सम्पूर्ण HDD लाई SSD मा क्लोन गर्नुहोस्, सिधा HDD चयन गर्नुहोस् र "प्रतिलिपि डिस्क" छनौट गर्नुहोस्। यहाँ, उदाहरणका लागि म विन्डोजलाई एसएसडीमा सार्दैछु।
चरण:: SSD छान्नुहोस् Windows मा सार्नको लागि र "अर्को" क्लिक गर्नुहोस्।
चरण:: एक प्रतिलिपि विधि छनौट गर्नुहोस् र "अर्को" क्लिक गर्नुहोस्।
चरण:: क्लिक गर्न "समाप्त" बटन जारी राख्न।
चरण:: सबै परिवर्तनहरू लागू गर्न "लागू गर्नुहोस्" बटन क्लिक गर्नुहोस्।
प्रणाली माइग्रेसन वा डिस्क क्लोनको अधिक विवरणहरूको लागि, अधिक पढ्नुहोस्: विन्डोजलाई द्रुत रूपमा SSD मा सार्नुहोस् वा HDD लाई SSD अपग्रेड गर्नुहोस्
त्यसो भए, SSD लाई अनुकूलन गर्ने सुझावहरूको बारेमा कुरा गरौं।
सुझाव २: विभाजन पंक्तिबद्ध गर्नुहोस्
विन्डोज माइग्रेट गरेपछि वा एचडीडीलाई एसएसडीमा क्लोनिंग गरेपछि तपाईले विभाजनहरू प al्क्तिबद्ध गर्न अझ राम्रो प्रयास गर्नुहुनेछ, किनकि क्लोन गरिएको विभाजनहरू गलत मिसन गर्न सजिलो छ, नयाँ सिर्जना गरिएको विभाजनहरू सधैं पigned्क्तिबद्ध गरिएको छ। गलत हस्ताक्षर गरिएको पार्टिसनको साथ, विन्डोज र प्रोग्रामहरू ढिलो चल्नेछ। थप रूपमा, पढ्न-लेख्ने गति पनि कम हुनेछ।
विस्तृत अपरेशनहरू निम्नानुसार छन्।
पहिले, MiniTool पार्टीशन विजार्ड फेरि सुरु गर्नुहोस् र इन्टरफेस प्राप्त गर्नुहोस्:
त्यसोभए, एसएसडी चयन गर्नुहोस् र "सबै विभाजनहरू पign्क्तिबद्ध गर्नुहोस्" सुविधा छनौट गर्नुहोस्। यदि प्रोग्रामले पत्ता लगाउँदछ कि त्यहाँ गलत विभाजनहरू छन्, यसले तपाईंलाई कति विभाजनहरू पigned्क्तिबद्ध हुनुपर्छ भनेर बताउँदछ र बाँकी सञ्चालनको रूपमा सबै अपरेशन्स बनाउँदछ। यस समयमा, जबसम्म तपाइँ "लागू गर्नुहोस्" बटन क्लिक गर्नुहुन्छ, यसले सबै गलत विभाजन विभाजनहरू स्वचालित रूपमा पंक्तिबद्ध गर्दछ।
सुझाव:: BIOS मा AHCI मोड सक्षम गर्नुहोस्
यो सुविधा सक्षम गर्नाले, तपाईं आईडीई मोडको उपयोगको तुलनामा छिटो डाटा ट्रान्सफर रेट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो सुविधा सक्षम गर्न, कृपया यो जस्तै गर्नुहोस्:
सर्वप्रथम, BIOS प्रविष्ट गर्न आवश्यक कुञ्जी थिच्नुहोस्। यदि तपाइँ कुन कुञ्जी थिच्नु थाहा छैन भने, केवल इन्टरनेटमा खोजी गर्नुहोस्।
दोस्रो, SATA प्रकार वा एएचसीआई को मोड सेट गर्नुहोस्।
जहाँसम्म, यदि तपाईं निलो स्क्रिन पाउनुभयो र विन्डोजले ACHI सक्षम गरे पछि बुट गर्दैन, कृपया यसलाई निम्नको रूपमा समाधान गर्नुहोस्:
एएचसीआई लाई IDO वा RAID मा BOIS मा परिवर्तन गर्नुहोस्, जस पछि विन्डोज फेरि बूटयोग्य हुनेछ।
त्यसो भए, Regedit.exe सुरू गर्नुहोस् र यसमा नेभिगेट गर्नुहोस्: HKEY_LOCAL_MACHINES प्रणालीCCCCNCrolrolSetServicesmsahci
अर्को, "स्टार्ट" को मान डेटा ० मा परिवर्तन गर्नुहोस् र "ठीक छ" मा क्लिक गर्नुहोस्।
त्यस पछि, तपाईं regedit.exe बाट अन्त्य गर्न सक्नुहुनेछ, कम्प्युटर पुनःस्टार्ट गर्नुहोस्, BOIS प्रविष्ट गर्नुहोस्, र फेरि AHCI सक्षम गर्नुहोस्। त्यसो भए, विन्डोज सफलतापूर्वक बुट हुनु पर्छ।
सुझाव 4: C ड्राइभ ठूलो पार्नुहोस्
सी ड्राइभसँग कम्तिमा १०% खाली ठाउँ हुनुपर्छ, जुन कम्प्यूटर चल्ने गति बढाउनको लागि राम्रो हो। यदि विन्डोज डिस्क प्रबन्ध उपयोगिताले तपाईंलाई ड्राइभ सी विस्तार गर्न अनुमति दिँदैन, उदाहरणका लागि विस्तार भोल्युम सुविधा खैरो छ, मिनी टूल पार्टिसन विजार्डमा मोड गर्नुहोस् जुन कुनै पनि अवस्थित विभाजनबाट खाली ठाउँ लिन सक्दछ वा सी डिस्क विस्तार गर्न एकै डिस्कमा अनलोक गरिएको खाली ठाउँ लिन सक्छ।
त्यसो भए, अन्य विभाजनहरूबाट खाली ठाउँ लिनुहोस् वा अन्त्य नगरिएको ठाउँ खाली ठाउँ लिन र ड्र्याग स्लाइडिंग ह्याण्डल खाली ठाउँ लिने खाली ठाउँ लिन निर्णय गर्नुहोस्।
अन्तमा, क्लिक गर्नुहोस् "लागू गर्नुहोस्" यस परिवर्तनलाई सम्पादन गर्नका लागि।
सुझाव 5: तपाइँको एसएसडी डिफलग नगर्नुहोस्
यूएसबी फ्ल्यास ड्राइव जस्तै, एसएसडीले डाटा छिटो पढ्न सक्छ HDD सँग तुलना जुन अनुरोध गरिएको डाटाको लागि हेर्नु आवश्यक पर्दछ। तसर्थ, त्यहाँ सबै फाईल खण्डहरू सँगै भेला गर्न आवश्यक छैन। Defragging ले कार्य सुधार गर्दैन, र यसको विपरित, यसले धेरै अनावश्यक लेखहरू उत्पन्न गर्दछ, जसले SSD लाई जीवनकालमा केही हदसम्म असर गर्ने छ।
सुझाव:: क्याचिंग लेख्न सक्षम गर्नुहोस्
दुबै एचडीडी र एसएसडी प्रयोगकर्ताहरूले लेख्ने क्याचि better राम्रोसँग सक्षम गरेका थिए। लेखन क्याचि enabled सक्षमको साथ, उच्च-स्पीड वाष्पशील मेमोरी डिस्क ड्राइभमा पठाइएको आदेशहरू स collect्कलन र क्यास गर्न प्रयोग हुनेछ, जसले केही हदसम्म कम्प्युटरको प्रदर्शन सुधार गर्न सक्दछ।
कसरी लिने क्याचिंग सक्षम गर्ने:
उपकरण प्रबन्धकमा जानुहोस्, डिस्क ड्राइभहरू विस्तृत गर्नुहोस्, एसएसडीको दायाँ क्लिक गर्नुहोस्, विशेषताहरू छनौट गर्नुहोस्, र नीति ट्याब अन्तर्गत "उपकरणमा लेख्ने क्याचिंग सक्षम गर्नुहोस्" विकल्प जाँच गर्नुहोस्।
अधिक जानकारी को लागी SSD बाट अधिक प्राप्त गर्न को लागी हेर्नुहोस् विन्डोज १० / / / .10.१ / in मा कसरी एसएसडीबाट सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन प्राप्त गर्ने.
ठिक छ, के तपाइँ एसएसडी लाई नमस्कार भन्न र HDD लाई अलविदा भन्न लाग्नु भएको छ? यदि हो भने, अब तपाईंको HDD अपग्रेड गर्नुहोस् यी tips सुझावहरू माथि एसएसडीमा।
म विकसित टेक्नोलोजीहरू, कम्प्युटर सफ्टवेयर / हार्डवेयर, र कूटनीतिक प्रक्रियाहरूका साथै मानवीय अन्तर्क्रिया र सामाजिक व्यवहार मानदण्डहरूको प्रभावबाट मोहित छु।